CAQABADAHA HORYAALLA DOORASHADA SOMALILAND EE LOO ASTEEYEY MARCH 2019 | Center For Policy
by CPA | Sep 11, 2018 | Monitoring Reports | 0 comments
Bisha March 27, 2019 waa maalinta loo cayimay ama loo asteeyey inay Somaliland ka qabsoomaan doorashooyinka golaha deegaanka iyo Golaha Wakiilada oo isa-saaran. Muddadaas waxaa haatan ka dhiman wakhti ku siman lix bilood, hase ahaatee waxaa yaalla hawlo faro badan oo ay ahayd in xilli hore la sii qabto. Wakhtiga haatan hadhay ayaa cidhiidhi aad u weyn gelinaya in la qabto doorashooyinka Golaha Wakiilada iyo deegaanka.
Halkan ka Akhriso Warbixinta oo Dhamaystiran: Caqabadaha Horyaalla Doorashada
Ka sokow wakhtiga kooban ee haatan hadhay doorashada, waxa sidoo kale jira oo caqabad ku ah in doorashooyinku xilligoodii ku dhacaan, qodobo aad u badan oo haddii aan xal iyo go’aano laga gaadhin, inta sannadkan ka hadhay, ay keeni karayso in doorashooyinku ay markale dib u dhacaan wakhti kale. Qodobadaas waxaa ka mida:
Xeerka Doorashada oo muddo laba bilood ah horyaalla golaha wakiillada iyada oo haatan golaha wakiilladu ay galeen fasaxoodii caadiga ahaa, illaa haatan golaha wakiilladu kama doodin xeerka, waxaana xeerka ku jira oo caqabad ku ah in degdeg loo ansixiyo
Saami-qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee gobollada oo si weyn loogu kala aragti duwan yahay
Qoondada haweenka laga siinayo kuraasta baarlamaanka oo xeerka ku jirta.
Iyada oo aan weli isfaham laga gaadhin, tabashada Xisbiga Waddani uu ka muujiyey Guddida Doorashada ee Somaliland.
Xiisadda ka taagan gobollada bariga Somaliland oo culays amni ku keeni karta doorashooyinka dalka
Kaabistii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo illaa haatan waxba laga qaban.
Waxa muuqata in cidda iyo dhinacyada ay masuuliyadda qabashada doorashadu saaran tahay aanay ku hawlanayn falal iyo shaqooyin keeni kara in doorashooyinka raagay ay waqtiga loo cayimay ku dhacaan. waxaase jira ururada bulshada rayidka ah oo iyagu bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay kula kulmayaan dhinacyada arrimaha doorashadu khusayso iyaga oo kala hadlaya hawlaha doorashada.
Haddaba Xafiiska la socodka hawlaha doorashada (Election Monitoring Office) ee Xarunta Daraasaadka Siyaasaddu wuxuu wakhti geliyey inuu fahmo oo daraaseeyo duruufaha ku xeeran hawlaha doorasha, haddii la doonayo inay ku qabsoomaan xilligii loogu talo galay. Waxaase xafiiska u soo baxday inay caqabado aad u waaweyni ka horreeyaan in dhinacyada ay khuseeyaan hawlaha doorashadu inay ku xalliyaan caqabadaha jira, ka hor inta aan sannadku dhammaanin.
Guud ahaan Somaliland waxay qabatay 6 doorasho oo isugu jira, saddex doorasho madaxweyne, laba doorasho gole deegaan, iyo hal doorasho baarlaman. Sidoo kale waxaa Somaliland ay qabatay hal afti dastuur iyo afar-jeer oo kale oo ay qabatay diiwaangelin codbixiyo, kaadh bedel iyo kaadh qaybin.
Aftida Dastuurka, Diiwaangelinta, Kaadh-qaybinta iyo Doorashooyinka ay Somaliland qabato, dhammaantood waxay u baahan yihiin in la wada gaadho goobaha codbixinta ee ku yaalla 23 degmo doorasho, waxayna wataan culays amni, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba.
Waxaa xusid mudan in doorasho kasta oo Somaliland ay qabanaysay, badankoodu ay ahaayeen kuwo aan la qaban xilligii loogu talo galay, dhinaca kalena waxaa soo baxaysa celcelis ahaan in 16-kii sano ee ugu dambeeyey inay Somaliland qabanaysay 18-kii biloodba hal mar, doorasho ama hawl doorashada la xidhiidha sida diiwaangelinta codbixiyaha oo kale.
Doorasho kasta oo ay Somaliland gasho, waxay reebaan dhibaatooyin ka dhasha, oo kala qaybiya bulshada, sida arrimo la xidhiidha amniga, kala qaybsanaanta bulshada, kala qaybsanaan siyaasadeed iwm. Taas oo ah duruuf adag oo hortimaadda madaxweyne kasta oo la doorto, ama marka Somaliland laga qabto doorasho kale.
CPA waxay ugu baaqaysaa Madaxweynaha Qaranka, saddexda Xisbi ee dalka, Guddida Doorashada, Golaha Wakiillada iyo cid kasta oo kale oo ay khuseeyaan arrimaha doorashadu inay doorkooda ka qaataan xallinta hawlaha caqabadaha doorashada horyaalla, isla markaana in dhinacyadu ay la yimaadaan is-faham iyo qorshe hawleed farsamo oo loo dhan yahay oo caddayn karaya sida farsamo ahaan loo qaban karo doorashooyinka la filayo.
Waxaanu ugu baaqaynaa Madaxweynaha inuu hoggaamiyo talo qaran oo go’aan lagaga gaadhayo arrinta saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka, taas oo muhiim u ah in la ansixiyo xeerka doorashada, xilli kasta oo dib u dhac ku yimaaddo ansixinta xeerkaasina waa caqabad hor leh oo dib u riixaysa xilliga doorashada.
Waxaan ku baaqaynaa in la dedejiyo ansixinta Xeerka Doorashada oo ay ku jirto qoondada haweenka, iyo beelaha la haybsooco, si loo bilaabo hawlaha diyaargarowga doorashada.
Waxaan ugu baaqaynaa Xukuumadda iyo Beesha Caalamka inay la yimaaddaan qorshe ay ku bixinayaan lacagaha doorashada iyo kaabista diiwaangelinta codbixiyayaasha, si loo galo hawsha diyaargarowga doorashada.
Waxaan markale ku baaqaynaa in la xalliyo arrimaha Komishanka Doorashada iyo Xisbiga Waddani, si loo bilaabo hawlaha diyaar-garawga doorashada. Xilli kasta oo xallinta arrintani ay dib u dhacdo, waxay saamayn ku yeelanaysaa wakhtigii la filayey in doorashadu ay qabsoonto.
Waxaan ku baaqaynaa in la xalliyo xiisadaha dhinaca ammaanka ee ka jira bariga Somaliland, sida Jabhadda hubaysan, iyo arrinta Tukaraq haddii xal loo heli karo, kuwaas oo culays dhaqaale iyo mid amniba ku yeelan kara doorashooyinka Somaliland.
Copyright © 2018 C.P.A